IBafana ihlose ukuthola amaphuzu aphezulu | Scrolla Izindaba
Umqeqeshi weBafana Bafana uMolefi Ntseki uyajabula futhi uyafuna ukuthola amaphuzu ayisithupha asezonikezwa abantu base-Island.
NoNtseki ubheme ipayipi lokuthula nesihlabani se-Glasgow Rangers uBongani “Ben 10” Zungu. Umdlali wasesiswini akakwazi ukulinda ukuthi ashiye abadlali be-Sao Tome bedla uthuli lwakhe. Abanye abadlali abasele phesheya kwezilwandle nabo baqale ukungena namuhla.
Iqembu leBafana liye emkhosini obusezinkundleni yezemidlalo i-Moses Mabhida ekuqaleni kwaleli sonto lapho bekuzokwethulwa khona unozinti weBafana ongasekho uSenzo Meyiwa owadutshulwa wabulawa esemzini kanina wentombi yakhe uKelly Khumalo e-Vosloorus kowezi-2014.
Abantu baseNingizimu Afrika bajabule ngokuthi umfelandawonye webhola likanobhutshuzwayo i-Sao Tome ucele ukuthi iNingizimu Afrika ukuba isingathe le midlalo yomibili, ilahle ithuba labo lokudlala ekhaya. Umdlalo uzodlalelwa e-Port Elizabeth, ngokusobala kungenxa ye-Covid nokuqinisekisa isikhathi esifushane sokuhamba.
Lokhu kunikeze amacala kaNtseki ithrekhi yangaphakathi. Ochwepheshe abaningi bakholelwa ukuthi kungaba yiphutha uma bezolahla amaphuzu abebonakala bewanikwe mahhala.
“Kusobala ukuthi sizohlomula ngokudlala le midlalo emibili lapha eNingizimu Afrika,” kusho umqeqeshi uNtseki.
“Kumele senze kahle ngoba abalandeli bafuna imiphumela emihle. Asizithathi kancane izitha zethu futhi silwenze kahle uphenyo lwethu.”
UNtseki nabafana bakhe basendaweni yesibili ku-Group C we-African Cup of Nations ngemuva kwemizuliswano emibili yemidlalo. Bahlule i-Sudan bahlulwa yi-Black Stars yase-Ghana. Ngemuva kwe-Sao Tome, bazodlala ne-Sudan bese bedlala ne-Ghana eGoli.
Sithinte ku-[email protected]frica